Eny anivon’ny hopitaly: raikitra ny fifaninanana hahazoana ny « Label 5S » | NewsMada
Nampahafantarina, omaly, tetsy amin’ny HJRA Ampefiloha ny “Label 5S”, mari-pankasitrahana hametrahana ny lentan’ny hopitaly mendrika amin’ny fomba fiasa sy fanatsarana ny tontolon’ny hopitaly, ary indrindra ny fanajana ny marary….
Toky ho an’ny marary eny anivon’ny hopitaly ny hisitraka ny tontolo mirindra sy madio ary anjakan’ny fandriampahalemana sy ny fandraisana mendrika ny fametrahana ity “Label 5S” ity.
Ankoatra ireo, hahamora ny fandraisana an-tanana ny marary sy ny hakingan’ny fomba fiasan’ireo mpiasan’ny fahasalamana sy ny mangarahara eo amin’ny vola ilaina ary ny vidim-panafody ihany koa izany.
Fomba fiasa manaraka ny ny fitantanana tsara sy kalitao mendrika hanatsarana ny tontolon’ny asa eny anivon’ny hopitaly ny 5S Kaizen-TQM, izay nentin’ny Japoney teto Madagasikara efa hatramin’ny taona 2007.
Sivanina, Sokajiana, Sasana, Soratana, Sokajiana (5S). Mila mahay manavaka tsara ny antontan-taratasy sy ny karazana fitaovana ilaina sy ny tsy ilaina. Mahay manasokajy ireo antontan-taratasy ilaina ireo amin’ny toerana tokony hisy azy ary mora ny fitadiavana azy. Mila sasana madio sy havaozina ny fitaovana mba ho azo ampiasaina avy hatrany sy ho ara-pahasalamana tokoa. Voarakitra an-tsoratra ary hatao tazan’ny maso ny fomba fiasa mba tsy hohadino… Ankoatra ireo, saintsainina avokoa ny tokony hatao ary arahina ny fitsipi-pifehezana.
Amin’izao fotoana, efa mihatra amin’ny hopitaly CHU 22 sy CHRR 16 eto Madagasikara ny fomba fiasa 5S. Miitatra amin’ireo hopitaly eny anivon’ny distrika CHRD 23 ihany koa izany, amin’izao fotoana ary tonga hatreny amin’ny CSB 1654.
Raha ny tombana hatao isan-taona, fantatra fa efa mahafehy ny fampiharana ity fomba fiasa 5S ity ireo mpiasan’ny hopitaly. Azo tsapain-tanana ny vokatra, indrindra ny fahitana ny fanatsarana ny fahadiovana sy ny fotodrafitrasa ary ny fanatsarana ny fandraisan’olona.
Mendrika ny omen-danja izany ezaka izany entina hampaherezana ireo mpiasan’ny hopitaly ka izany indrindra no nanaovana ny “Label 5S”. Ho azon’izay hopitaly mahafeno ny fepetra, araka izany, ity “Label 5S” ity. Anisan’ny fepetyra voalohany fampiharana ny 5S amin’ireo sampan-draharaha rehetra ao amin’ny hopitaly. Tokony hahafa-po ny fampiharana ny 80% io 5S io. Mahasahy manao fanamby fa hahavita hitazona ao anatin’ny roa taona io fomba fiasa io ary hahatratra ny fenitry ny kalitao “Kaizen”.
Manokatra fijery hafa ho an’ny mpitazana ny fahazoan’izay hopitaly mendrika ity “Label 5S” ity. Toy ny dokambarotra ho an’ny hopitaly ihany koa izany, manoloana ny marary sy ireo mpiara-miombon’antoka.
Hanomboka amin’ny voalohan’ny taona 2019 ny fanombohan’ny fangatahana ity mari-pankasitrahana “Label 5S” ity.